Home » Vaovao momba ny fizahantany » IMEX America dia manamarika dingana lehibe iray hafa amin'ny làlana mankany Mandalay Bay
IMEX Amerika amin'ny lalana mankany Mandalay Bay
Ny fientanam-po manodidina ny fiverenan'ny IMEX America dia mitohy mitombo miaraka amin'ny lisitr'ireo fampirantiana mitombo manerantany izay efa voamarina ary miomana hanao raharaham-barotra.
Ny fampirantiana manerantany ho an'ny IMEX America dia avy any Gresy ka hatrany Milwaukee ary avy any Bahamas ka hatrany Kansas sy ny sisa.
Ao anatin'ny fijery vaovao, ny làlam-panabeazana dia namboarina mba hitazomana ny fifantohana mafy amin'ny filàn'ny fampandrosoana ny matihanina sy ny tena ilaina amin'ny toetr'andro ankehitriny.
IMEX Group dia manasa mpandahateny sy manam-pahaizana handray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana sy fampandrosoana ho an'ny fandaharana.
Ny sehatr'asa fampirantiana iraisam-pirenena nifanarahana ho an'ny IMEX America, natao ny 9 - 11 Novambra, dia mivelatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny indostria ary misy toeran-kaleha toa an'i Greece, Detroit, Newport Beach, Michigan, Bahamas, Aruba, Kansas, Milwaukee; miaraka amin'ireo orinasa ao anatin'izany Club Med Groups & Incentives, Live Nation Special Events, Global DMC Network avy amin'i JTB, Fiesta Americana Hotels & Resorts ary The Hoxton.
"Ny ekipanay dia nanana fanombohana matanjaka tamin'ny fandaminana ny seho mivantana misy antsika ary ny isan-karazany amin'ireo mpamatsy voamarina dia ampahany lehibe amin'izany," hoy ny fanazavan'i Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX. "Nivoatra ny IMEX America tamin'ity taona ity isika - fanontana faha-10 - hanomezana fomba fiasa vaovao sy atiny vaovao miaraka amin'izay fotoana mety sy mafy azo hanaovana raharaham-barotra izay manohana ny seho mivantana rehetra."
Ao anatin'ny seho fijerena vaovao, ny làlam-panabeazana dia namboarina indray mba hitazomana mafy ny filàn'ny fampandrosoana ny matihanina sy ny tena ilaina amin'ny toetr'andro ankehitriny. Ny vondrona IMEX izao dia manasa mpandahateny sy manam-pahaizana avy any ivelany sy ao anatin'ny sehatry ny hetsika orinasa handray anjara amin'ny fandaharam-pampianarana sy fampivoarana ny seho.
Ny lalana vaovao dia: